Shil ... maya foo-foo fadlan. | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 10, 2006 Talaado, Oktoobar 10, 2006 Douglas Karr
Shalayto waxay ahayd maalintii iigu horreysay ee aan guriga imaado oo aan aagag usoo baxo. Maanta waan dhacay. Sida inbadan, waxaan ahay makhluuq caado ah. Si xiiso leh ugu filan, caadooyinkeygu waa toddobaadle, in kastoo. Dhammaadka usbuuc-dhammaadkeygu had iyo jeer waa ficil-celin sidaa darteed caado kasta oo aan ku jiray usbuucii ka hor, caadi ahaan way dhammaatay fiidnimada Sabtida. Haddii aan ka soo daaho shaqada Isniinta, caadi ahaan waan soo daahaa toddobaadka oo dhan. Haddii aan shaqeeyo goor dambe oo Isniinta ah… Waxaan shaqeeyaa goor dambe usbuuca oo dhan.
Toddobaadkan dhammaadkiisii ​​ayaan shaqeeyay dhammaadka wiigga. Waxaan u soconaa siideyn goobta shaqada ah, waxaanan ku mashquulsanaa wax aan ka yarayn 6 mashruuc oo isku mar ah. Ficilka isu dheellitirka waa mid xiiso leh, laakiin waxaan udhaqaaqayaa si aad iyo aad u badan… aniguna si fudud ayaan usii shaqeeyaa Xalay wey ila soo qabsatay waanan suuxay. Caawa, waan dhacay. Waan saxaroodaa. Aniguna waxaan helay 'usbuucii caadadayda' bilow wanaagsan. Hadda si dhakhso leh ayaan u daali doonaa markaan shaqada ka soo laabto waxaana suuragal ah inaan is arko anigoo hurdaya habeen kasta markaan guriga imaado. Argh.
Dhinaca dhalaalaya, taasi waxay ka dhigan tahay inaan dalab ahay, had iyo jeer waa wax fiican! Dhinaca taban, ma jecli inaan ku dego shaqadayda. Waxaan faham wanaagsan u leeyahay gudbinta kaamilnimada iyo gaarsiinta. Waxaan jeclahay kaamil. waan necbahay kaliya gaarsiinta… in kastoo macaamiishaydu aysan waligood ogaan karin faraqa. Gaarsiinta badanaa waxay ka dhigan tahay bilo kadib waxaan is arkaa wax 'dib uqabasho' ah oo aan ogaa inaan sifiican ugu qaban karay bixinta hadii aan haysto waqtiga dheeriga ah
Suuqgeynta iyo softiweerku badanaa waa sidan oo kale, in kastoo, miyaanay kula ahayn? Wakhtiyada kama dambaysta ahi waxay dalbanayaan dil inta badanna waxay tuuraan kaamil ahaan. Kalandarka ayaa inta badan ka muhiimsan natiijooyinka. Baahida loo qabo in wax la gaarsiiyo ayaa ka xoog badan baahida loo qabo in si dhammaystiran wax loo gaarsiiyo. Badanaa, waxaan ogaadaa in macaamiisha ay aad u doorbidayaan sifooyinka, shaqeynta, iyo qurxinta si ay wax ugu helaan gacmahooda sida ugu dhaqsaha badan. Kani ma cillad Mareykan baa? Rush, degdeg, deg deg ah… shil? Mise tani waa cillad caalami ah?
Uma doodayo 'gurguurta'. Creep waa marka qeexitaanka dhammaystirku uu 'creep' u sii socdo ilaa aad waligaa awoodi kari weydo inaad dhammaystirto mashruuc. Waan quudhsadaa 'gurguurta'. Xitaa iyada oo aan lahayn wax gurguurta, sidee ayaynu marnaba ugu muuqan inaynaan haysan waqti aan si dhammaystiran u fulino?
Warshadda Shukulaatada ee Koonfurta Bend, waxaan ku dalbanayaa qaxwada aan la joogo maya foo-foo… Macnaha maya qaadada shukulaatada, kareem karbaash ma leh, cherry malahan, buskudka shukulaatada malahan ama ku saydh sharoobada rup kaliya kafeega Maya foo-foo iima hesho bunkeyga, aniga oo aan sugin waxyaabaha kale.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan waligaa tagin Warshad Shukulaatada South Bend, waxaad weyday meel aad ufiican oo shaqaale weyni kujiraan. Waxay leeyihiin shakhsiyad… maahan drones aan caqli-gal ahayn. Marka ugu horeysa ee aad hesho mocha fiican, hubi inaad hesho foo-foo. Waa daaweyn fiican.
Ku noqo ujeedkeyga… shirkadaha sida Google, Flickr, 37 Calaamadaha iyo guulaha kale ee casriga ahi waxay ku tuuraan 'foo foo'. Dadkani waxay dhisaan barnaamij weyn oo aan lahayn foo foo. Waxay dhisaan codsiyo shaqada lagu dhammeeyo, waxayna si caddaalad ah u qirayaan in aysan wax intaas ka badan qaban. Way shaqaysaa. Si fiican ayey u shaqeysaa. Qaarkood waxay u maleyn karaan inaysan 'qummanayn' inkasta oo ay ka maqan tahay foo-foo. Guusha weyn iyo heerarka korsashada ayaa ii sheegaya in tani run ahayn inta badan, in kastoo. Kaliya waxay rabaan inay shaqada qabato - xalliso dhibaatada! Waxaan ku ogaanayaa shaqadayda, inaan waqti badan ku qaadanno foo-foo.
Waxaan la yaabanahay haddii aad shil gasho adigoon foo foo lahayn.
Waxaa laga yaabaa inaan u baahanahay inaan bilowno abaabulkeena sidaan u gaarsiin lahayn si aan si wanaagsan oo dhaqso leh u gaarsiino:
Foo-foo:Maxaan ugu yeeraynaa? Sidee u eegaysaa? Maxay yihiin dhammaan xulashooyinka aan ku dhejin karno? Maxay tartamayaashayadu samaynayaan? Maxay macaamiisheennu rabaan? Goorma ayey tahay inaan qabanno?
No foo-foo: Maxay qabanaysaa? Sidee u samaynaysaa? Sidee isticmaaluhu u filayaa inuu sameeyo? Maxay isticmaaleyaasheennu u baahan yihiin? Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa in la sameeyo?
Oktoobar 16, 2006 at 5:07 PM
Foo-foo, foo-foo… wali waxay isku dayeysaa inay fahanto waxa loola jeedo waxa la xiriira software-ka, ka soo horjeedka kafeega. Kafeega waxay u muuqatay mid fudud oo ku filan, sida foo-foo ku jirtay oo dhan waxay ahaayeen walxo siyaado ah oo aan aheyn qaxwada. Tusaalooyinkaaga shirkadaha tuurista foo-foo, dhammaan shabakadda 2.0 waxay umuuqataa, barnaamijyadooda inay u muuqdaan kuwo ku saleysan 'fudeyd', uguyaraan xagga aragtida isticmaale ahaan, shaqo ahaan iyo bilic ahaanba. Waxaan u maleynayaa haddii aan xoogaa wareersanahay waa meesha aad ku weydiiso foo-foo iyo maya su'aalaha foo-foo, maadaama aanan hubin in su'aalahan qaarkood ay soo saaraan foo-foo iyo in kale midkoodna catagory.
Maxaan ugu yeeraynaa? Hagaag, google, flickr iyo magacyada softiweerka loogu talagalay 37 calaamadaha dhamaantood waxay umuuqdaan kuwo sifiican uqabsanaya oo muhiim ah, waxaanan filayaa in wakhti ay laqimeen iyaga Sidee u eegaysaa? Fudud, nadiif ah, shabakad 2.0… markale fikirka qaar ayaa tan ugu galay shirkadahaas, xulashooyinka… wali foo-foo waxaan qabaa. Maxay tartamayaashayadu sameynayaan, weli muhiim, haddii ay jiraan si ay u sameeyaan wax ka soo horjeedda, ama ugu yaraan aysan u sameynin waxa ay sameynayaan. Waxa ay macaamiishu rabaan waa muhiim… waxa ay macaamiisha u maleeyaan inay doonayaan muhiimad ma leh. Goorma ayey tahay inaan qabanno, weli muhiim, gaar ahaan qaybta barnaamijka internetka.
Maxay qabanaysaa? Sidee u samaynaysaa? Maya foo-foo halkan ayaan qabaa. Sidee isticmaaluhu u filayaa inuu sameeyo? Aniga ahaan tani waxay noqon kartaa foo ama mid aan fooyin. Maxay isticmaaleyaasheennu u baahan yihiin? Waxaan u maleynayaa in aan halkan foo-fool aheyn. Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa in la sameeyo. Waayahay markaa su'aalaha labaad waxay iila muuqdaan kuwo aan macquul ahayn. Saldhigga koowaad waa waxa igu wareeriyay xoogaa.
Waxaa laga yaabaa in su'aasha aniga iigu muhiimsan ay tahay 'Maxaa loogu baahan yahay?'
Oktoobar 16, 2006 at 6:10 PM
Waxaad ku socotaa ujeedkeyga. Su'aaluhu aad ayey isugu eg yihiin, laakiin dhammaantood waxay u kala baxaan sidii saxda ahayd su'aasha aad weydiisay… 'Maxaa loo baahan yahay?'
Waxaan leeyahay saaxiib iyo saaxiib, Chris Baggott, yaa jecel inuu weydiiyo "Dhibaato noocee ah ayay xallisaa?". Magaca barnaamijka, muuqaalka, ikhtiyaarrada, tartanka, waxa la doonayo, waqtiga… dhammaan kuwaa fiiro gaar ah ayaa lagu siiyaa adduunka software-ka, laakiin weligood lama weydiiyo… “Waa maxay mushkiladda ay xalliso?”
Waa inaan waqti ku lumino su'aalaha saxda ah, halkii aan waqti badan ku qaadan lahayn ka jawaabida kuwa qaldan!